Dilaagii dunida ugu da’ada weynaa (Haweeney 96 sano jir ah oo dil geysatey) – SBC
Dilaagii dunida ugu da’ada weynaa (Haweeney 96 sano jir ah oo dil geysatey)
Amanda Stevenson ayaa loo aqoonsadey dilaaga ugu da’da weyn ka dib markii has ay toogasho ku dishey nin ay habaryar ilmo adeer ahaayeen oo lagu magacaabi jirey Johnny Rice oo 53 sano jir ahaa.
Amanda oo 96 sano jirta ayaa dilka ay ina adeerkeed dishey waxay u adeegsatey qori waxaana ay ku dhex dishey qolkiisa jiifka iyadoo maalin ka dib duqda dilaaga ah ay gacanta ku dhigeen ciidamada Booliiska deegaanka St Augustine, ee gobolka Florida ee dalka Mareykanka.
Amanda Stevenson oo horey u aheyd boostaale ka shaqeyn jirtey Boostooyinka ayaa waxay la nooleyd ninka ay dishey Johnny & xaaskiisa, waxaana la sheegay in uu jirey muran soo jiitamayey oo mudo ka dhaxeeyey duqda gacan ku dhiiglaha ah iyo duqa ay dishay.
Qaar ka mid ah dariska guriga dilku ka dhacay ayaa sheegay inay maqleen dhawaaqa rasaaseed oo subaxnimadii hore ee Axadii la soo dhaafay ka dhacay, iyadoo qof ka mid ah dariska oo lagu magacaabo Karen Soukiasian uu sidaasi u sheegtay Booliiska iyo saxaafada.
Karen Soukiasian waxay intaasi sii raacisey in Johnny iyo xaaskiisa ay bilooyin ka hor gurigooda keeneen eedadood si ay u xanaaneeyaan, balse mar kasta waxaa ka dhex aloosnaa buuq iyadoo gurigaasi ay yimaadeen booliiska iyo kooxaha adeega bulshada.
Sanadkii 2009-kii dalka Mareykanka waxaa ka dhacay dilkii ugu da’ada weynaa ka dib markii haweenay 98 sano jir ah oo lagu magacaabo Laura Lundquist ay dishey qof 100 sano jir ahaa oo ay wadaagayeen qol ka mid ah goobaha xanaanada dadka da’ada ah ee gobolka Massachusetts ee dalka Mareykanka.